बेलैमा साहुको दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा जेल जान बाध्य - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 social Socity स्थानीय बेलैमा साहुको दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा जेल जान बाध्य
बेलैमा साहुको दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा जेल जान बाध्य
Marganugamidaily प्रकाशित समय 11:13:00 PM
धनुषा, ३१ भदौ । साहुसँग लिएको दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा जनकपुरका एक दलित एवं विपन्न परिवारका व्यक्ति जेल जाने भएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१२ कुवा बस्ने ६० वर्षका राधाकृष्ण खत्वेलाई साहुबाट लिएको ऋण नतिरेको भन्दै अदालतले जेल सजाय सुनाएको हो ।
खत्वेले २०४६ साउन १५ गते स्थानीय विक्रम यादवसँग १ हजार रुपैयाँ ऋण लिनुभएको थियो । एकहजार ऋणको विक्रमले खत्वेसँग तीनहजार रुपैयाँको कपाली तमसुक बनाएका थिए । र, तमसुकअनुसार मासिक तीनसय रुपैयाँका दरमा खत्वेले ब्याज तिर्नु पर्ने थियो ।
२०४७ जेष्ठ ८ गते खत्वेले साहु विक्रमलाई ८ सय रुपैयाँ फिर्ता गरे । १ हजार रुपैयाँको ९ महिनाको ब्याज २ सय ७० र मूलधनमा बाँकी २ सय रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो ।
त्यति रकम समेत खत्वेले तिर्न नसक्दा साहु यादवले २०४९ साल भदौ १५ गते श्रीमती गुलाबदेवी यादवको नाउँमा बाँकी रहेको ४ सय ७० रुपैयाँको २ हजार ९ सयको तमसुक बनाउन लगाए । रकम थपेर कागज बनाएपछि खत्वेले तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा यादवले फेरि वि.स. २०५८ साल असार २० गते खत्वेसँग ४० हजार रुपैयाँको तमसुक बनाए ।
‘अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । म जेल जाँदैछु खत्वेले भने ‘तर बेलैमा दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसकेकै कारण जेल जानु समाजबाट मानवीयता समाप्त हुँदै गएको मलाई लागिरहेको छ ।
आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको खत्वेले कृषि विकास बैंकमा धितो राखेको आफ्नो ४ कट्ठा जग्गा फुकुवा गराएर साहु यादवलाई लिन गुहार गरे । तर यादवले मानेनन् र फेरि १ लाख ६५ हजार रुपैयाँको कपाली तमसुक बनाउन बाध्य बनाए ।
पैसा तिर्न नसकेपछि विक्रमले आफूविरुद्ध वि.स. २०६३ साल पुष ९ गते जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेको खत्वेले बताए । यादवले मुद्दा गरेपछि स्थानीयले ७६ हजार रुपैयाँ लिएर मिलापत्र गर्न आग्रह गर्दा आफू तयार भए पनि साहु यादवले नमानेको खत्वेको भनाई छ ।
पैसा तिर्न नसकेपछि जिल्ला अदालत धनुषाले वि.स. २०६४ साल माघ २७ गते खत्वेलाई एक वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि खत्वेले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा गरे । र अहिलेसम्म चलिआएको पुनरावेदनको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले फैसला सदर गरेको छ । र अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
‘अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । म जेल जाँदैछु खत्वेले भने ‘तर बेलैमा दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसकेकै कारण जेल जानु समाजबाट मानवीयता समाप्त हुँदै गएको मलाई लागिरहेको छ ।उनले भने ‘म दुई सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा जेल गएपनि समाजका कोहि व्यक्तिलाई यस्तो दिन नआओस् ।
दुईसय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा विपन्न परिवारका खत्वेलाई जेल पठाउन बाध्य पार्ने साहु यादवले गाउँका अरु ९ जनासँग कपाली तमसुक गराएर जबर्जस्ती मनोमानी तरिकाले जथाभावी रकम असुल्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।
#Breaking #Headline1 #Headline2 #social #Socity #स्थानीय